Burma dilinde en sık kullanılan kelimeleri içeren video
Neden ve nasıl sesli Birmanca kelimeleri öğrenilir?
Burma'daki ana din Budizm'dir ve bu yüzden giderek daha fazla insanı bu yaşam felsefesine çekmektedir. Aynı zamanda birçok kültüre ve birçok mutfak zenginliğine sahip bir ülkedir. (ားသေသောက်ဆဘယ်မိုငုင်ကောင်းှးာရှိပါသလဲ / its thauk? SaiN kaung bei mha shi' Ba the lei: " yemek için iyi yerler nerede?"), ahlaki ve çevresel konuları araştırır. Ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorsanız, şehirlerin güzelliği ve içindeki yol etkinliği sizi şaşırtacak (တက်(က) စီ for "taxi"), aynı zamanda halkın geleneklerine göre.
Dil birçok tek heceli kelime içeriyor, bu yüzden ilk bakışta öğrenmek kolay görünebilir. Yaygın bir uygulama sizi hızlı bir şekilde dile alıştırmanın yanı sıra, hem yeni başlayanlar hem de bir gezi sırasında temel kelime dağarcığına ihtiyaç duyanlar için tasarlanmış kelime sayfalarımızın incelenmesi (ကျနော်တို့ အလည်လာတာပါ။ / Kya nau to' ah lei la ta ba : " tatildeyiz ").
Kelime sayfalarımızla ve Burma'nın sesine alışmak için Romanlar, filmler, dizi ve müzik seçimlerimizle dilin temellerini öğrenin.
Kendinizi Burma'nın kültürüne kaptırmak için içerik seçimi
The Glass Palace – Amitav Ghosh (English)
Burmese Days – George Orwell (English)
Burma Chronicles – Guy Delisle (English)
Golden Kingdom (English)
Mudras Calling (English)
Shwe Kyar (English)
The sun, the moon and the truth (English)
Ru guo wo niu you ai qing (English)
Ah Moon အမွန်း - Pyaw Maya tot Pyone Pya
Chit San Maung - Show me the way
Birçok sanatçı sansürden kaçınmak için genellikle sözleri değiştirerek mevcut şarkıları kapsar.
Bu kelimeler ve ifadeler temaya göre sınıflandırılmıştır. Test veya Kurslar düğmelerini tıklayarak tam Birmanya kursuna ücretsiz erişebilirsiniz. Yazıcı düğmesine tıklayarak temanın tüm ifadelerini yazdırabilirsiniz. Bu içerik ücretsizdir.
🔊 Merhaba 🔊 မင်္ဂလာပါရှင်
🔊 Iyi akşamlar 🔊 မင်္ဂလာပါရှင်
🔊 Hoşça kal 🔊 သွားတော့မယ်
🔊 Görüşürüz 🔊 တွေ့မယ်နော်
🔊 Evet 🔊 ဟုတ်ကဲ့
🔊 Hayır 🔊 မဟုတ်ဘူး
🔊 Lütfen 🔊 ဒီမှာရှင်
di mha shiN
🔊 lütfen, bakar mısınız 🔊 တစ်ဆိတ်လောက်
tit saiʔ lautʔ
🔊 Teşekkür ederim 🔊 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
🔊 Çok teşekkürler! 🔊 ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
🔊 Yardımınız için teşekkürler 🔊 ကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
🔊 Rica ederim 🔊 ကိစ္စမရှိပါဘူး
🔊 Rica ederim 🔊 ရပါတယ်
ya ba tei
🔊 Tamam 🔊 ကောင်းပါပြီ
🔊 Bu kaç para ? 🔊 ဒါဘယ်လောက်ပါလဲ
🔊 Üzgünüm 🔊 စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာ
🔊 Üzgünüm 🔊 စိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်
saiɁ ma shi pa nei' shiN
🔊 Anlamıyorum 🔊 နားမလည်ပါဘူး
🔊 Anlıyorum 🔊 သိပြီ
🔊 Anlıyorum 🔊 နားလည်ပြီ
nā lé pa pyi
🔊 Bilmiyorum 🔊 မသိဘူး
🔊 Yasak 🔊 ခွင့်မပြု
🔊 Yasak 🔊 မလုပ်ရ
ma loʔ ya
🔊 Afedersiniz tuvaletler nerede? 🔊 အိမ်သာဘယ်မှာရှိပါသလဲ
🔊 Yeni yılınız kutlu olsun! 🔊 မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ
🔊 Doğum günün kutlu olsun! 🔊 မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ
🔊 Iyi tatiller! 🔊 မဲရီး ခရစ်စမတ်စ် /Merry Christmas
🔊 Tebrikler! 🔊 ဂုဏ်ယူပါတယ်
🔊 Tebrikler! 🔊 ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်
goN yū wuN myauk pa tai
🔊 Merhaba, nasılsın ? 🔊 နေကောင်လား
nai kaung lā
🔊 Merhaba, iyiyim, sen nasılsın 🔊 နေကောင်းပါတယ်
mai kaung pa tai
🔊 Birmanca biliyor musun? 🔊 ဗမာ/မြန်မာ စကားပြောတတ်လား
Myamar sa kā pyau tat lā
🔊 Hayır, birmanca konuşmuyorum 🔊 ဗမာ/မြန်မာ စကားမပြောတတ်ဘူး
Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
🔊 Birazcık 🔊 နည်းနည်းလေး
nei nei lai
🔊 Memleket neresi? 🔊 ဘယ်နိုင်ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
🔊 Nerelisin? 🔊 ဘာလူမျိုးလဲ
ba lu myō lai
🔊 Ben türküm 🔊 ကျနော် တာကစ်(ရှ) လူမျိုးပါ
kya nau turkey lu myo ba
🔊 Ya sen, burada mı yaşıyorsun ? 🔊 ဒီမှာနေတာလား
di mha nai ta lā
🔊 Evet, burada yaşıyorum 🔊 ဟုတ်တယ်၊ ဒီမှာနေပါတယ်။
hoʔ tai di mha nay pa tai
🔊 Benim adım Sarah, ya seninki ? 🔊 ကျမနာမည်က ဆာရာ ရှင့်နာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
🔊 Julian 🔊 ဂျူလီယံပါ
ju li an ba
🔊 Burada ne yapıyorsun ? 🔊 ဒီမှာဘာလာလုပ်တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
🔊 Tatildeyim 🔊 အလည်လာတာပါ။
ah lai la ta ba
🔊 Tatildeyiz 🔊 ကျနော်တို့ အလည်လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
🔊 Iş gezisindeyim 🔊 အလုပ်အတွက်လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
🔊 Burada çalışıyorum 🔊 ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
🔊 Burada çalışıyoruz 🔊 ကျနော်တို့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။
kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 Burada çalışıyoruz 🔊 ကျမတို့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 Burada güzel yemek nerede yenir? 🔊 စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်း ဘယ်မှာရှိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
🔊 Buralarda müze var mı ? 🔊 ဒီနားမှာ ပြတိုက်ရှိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
🔊 Nerede internet bulabilirim? 🔊 အင်တာနက်ဆိုင်ဘယ်မှာရှိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei
🔊 Birkaç kelime öğrenmek ister misin? 🔊 စကားနည်းနည်းသင်ချင်သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
🔊 Tabii ki! 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ကောင်းပါတယ်
hokʔ ké' kaung pa tei
🔊 Buna ne denir? 🔊 ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ
da bei lo kau lei
🔊 Bu bir masa 🔊 စားပွဲ
🔊 Bir masa. Anlıyor musun? 🔊 စားပွဲ၊ သိလား
sa pwè, thi lā
🔊 Bir masa. Anlıyor musun? 🔊 နားလည်လား
na lei lā
🔊 Tekrar eder misin lütfen? 🔊 ထပ်ပြောပြပါဦး
pyaN pyau pa ohN
🔊 Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen? 🔊 ဖြေးဖြေးလေးပြောပြပါ
pyei pyei pyau pa
🔊 Yazabilir misin lütfen? 🔊 ရေးပြပါ
yé pya ba
🔊 Bu masanın rengi hoşuma gitti 🔊 ဒီစားပွဲအရောင်ကိုကြိုက်တယ်
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
🔊 Bu kırmızı 🔊 အနီရောင်
ah ni yaung
🔊 Mavi 🔊 အပြာရောင်
ah pya yaung
🔊 Sarı 🔊 အဝါရောင်
ah woh yaung
🔊 Beyaz 🔊 အဖြူရောင်
ah pyu yaung
🔊 Siyah 🔊 အမဲရာင်
ah méi yaung
🔊 Yeşil 🔊 အစိမ်းရောင်
ah saiN yaung
🔊 Turuncu 🔊 လိမ္မော်ရောင်
laiN mau yaung
🔊 Mor 🔊 ခရမ်းရောင်
ka yan yaung
🔊 Gri 🔊 မီးခိုးရောင်
mi go yaung
🔊 Sıfır 🔊 သုည - ၀
🔊 Bir 🔊 တစ် - ၁
🔊 Iki 🔊 နှစ် - ၂
🔊 Üç 🔊 သုံး - ၃
🔊 Dört 🔊 လေး - ၄
🔊 Beş 🔊 ငါး - ၅
🔊 Altı 🔊 ခြောက် - ၆
🔊 Yedi 🔊 ခုနှစ် - ၇
🔊 Sekiz 🔊 ရှစ် - ၈
🔊 Dokuz 🔊 ကိုး - ၉
🔊 On 🔊 တစ်ဆယ် - ၁၀
🔊 On bir 🔊 ဆယ့်တစ် - ၁၁
🔊 On iki 🔊 ဆယ့်နှစ် - ၁၂
🔊 On üç 🔊 ဆယ့်သုံး - ၁၃
🔊 On dört 🔊 တစ်ဆယ့်လေး - ၁၄
🔊 On beş 🔊 တစ်ဆယ့်ငါး - ၁၅
🔊 On altı 🔊 တစ်ဆယ့်ခြောက် - ၁၆
🔊 On yedi 🔊 တစ်ဆယ့်ခုနှစ် - ၁၇
seʔ kouN nhit
🔊 On sekiz 🔊 တစ်ဆယ့်ရှစ် - ၁၈
🔊 On dokuz 🔊 ဆယ့်ကိုး - ၁၉
🔊 Yirmi 🔊 နှစ်ဆယ် - ၂၀
🔊 Yirmi bir 🔊 နှစ်ဆယ့်တစ် - ၂၁
nhit seʔ titʔ
🔊 Yirmi iki 🔊 နှစ်ဆယ့်နှစ် - ၂၂
nhit seʔ nhit'
🔊 Yirmi üç 🔊 နှစ်ဆယ့်သုံး - ၂၃
nhit seʔ thouN
🔊 Yirmi dört 🔊 နှစ်ဆယ့်လေး - ၂၄
nhit seʔ léi
🔊 Yirmi beş 🔊 နှစ်ဆယ့်ငါး - ၂၅
nhit seʔ ŋa
🔊 Yirmi altı 🔊 နှစ်ဆယ့်ခြောက် - ၂၆
nhit seʔ chauk
🔊 Yirmi yedi 🔊 နှစ်ဆယ့်ခုနှစ် - ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
🔊 Yirmi sekiz 🔊 နှစ်ဆယ့်ရှစ် - ၂၈
nhit seʔ chitʔ
🔊 Yirmi dokuz 🔊 နှစ်ဆယ့်ကိုး - ၂၉
nhit seʔ ko
🔊 Otuz 🔊 သုံးဆယ် - ၃၀
🔊 Otuz bir 🔊 သုံးဆယ့်တစ် - ၃၁
thouN seʔ titʔ
🔊 Otuz iki 🔊 သုံးဆယ့်နှစ် - ၃၂
thouN seʔ nhit
🔊 Otuz üç 🔊 သုံးဆယ့်သုံး - ၃၃
thouN seʔ thouN
🔊 Otuz dört 🔊 သုံးဆယ့်လေး - ၃၄
thouN seʔ léi
🔊 Otuz beş 🔊 သုံးဆယ့်ငါး - ၃၅
thouN seʔ ŋa
🔊 Otuz altı 🔊 သုံးဆယ့်ခြောက် - ၃၆
thouN seʔ chauk
🔊 Kırk 🔊 လေးဆယ် - ၄၀
🔊 Elli 🔊 ငါးဆယ် - ၅၀
🔊 Altmış 🔊 ခြောက်ဆယ် - ၆၀
🔊 Yetmiş 🔊 ခုနှစ်ဆယ် - ၇၀
kouN nhit' sai
🔊 Seksen 🔊 ရှစ်ဆယ် - ၈၀
chit ? Sai
🔊 Doksan 🔊 ကိုးဆယ် - ၉၀
🔊 Yüz 🔊 တစ်ရာ - ၁၀၀
🔊 Yüz beş 🔊 တစ်ရာ့ငါး - ၁၀၅
titʔ ya ŋa
🔊 Iki yüz 🔊 နှစ်ရာ - ၂၀၀
🔊 Üç yüz 🔊 သုံးရာ - ၃၀၀
🔊 Dört yüz 🔊 လေးရာ - ၄၀၀
🔊 Bin 🔊 တစ်ထောင် - ၁၀၀၀
🔊 Bin beş yüz 🔊 တစ်ထောင့်ငါးရာ - ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
🔊 Iki bin 🔊 နှစ်ထောင် - ၂၀၀၀
🔊 On bin 🔊 တစ်သောင်း - ၁၀၀၀၀
🔊 Ne zaman geldin buraya? 🔊 ဘယ်တုန်းကရောက်သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
🔊 Bugün 🔊 ဒီနေ့။
🔊 Dün 🔊 မနေ့က။
me nei' ka
🔊 Iki gün önce 🔊 နှစ်ရက်ရှိပြီ။
hnit yetʔ shi pyi
🔊 Ne kadar kalacaksın? 🔊 ဘယ်လောက်ကြာကြာနေမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
🔊 Yarın döneceğim 🔊 မနက်ဖြန်ပြန်မယ်။
me netʔ phyaN pyaN mei
🔊 Yarın değil öbür gün döneceğim 🔊 သဘက်ခါပြန်မယ်။
th metʔ kha pyaN mei
🔊 Üç gün sonra döneceğim 🔊 နောက်သုံးရက်နေရင်ပြန်မယ်။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
🔊 Pazartesi 🔊 တနင်္လာနေ့
ta niN la nei'
🔊 Salı 🔊 အင်္ဂါနေ့
iN ga nei'
🔊 Çarşamba 🔊 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
bo da hū nei'
🔊 Perşembe 🔊 ကြာသပတေးနေ့
kya tha pa 'tei nei'
🔊 Cuma 🔊 သောကြာနေ့
thauʔ kya nei'
🔊 Cumartesi 🔊 စနေနေ့
sa nei nei'
🔊 Pazar 🔊 တနင်္ဂနွေနေ့
ta niN ga nwé nei'
🔊 Ocak 🔊 ဂျန်နဝါရီ
ja nu ah ri
🔊 Şubat 🔊 ဖေဖော်ဝါရီ
pé bu ah ri
🔊 Mart 🔊 မတ်(ချ)
🔊 Nisan 🔊 ဧပြီ
a pa ril
🔊 Mayıs 🔊 မေ
🔊 Haziran 🔊 ဇွန်
🔊 Temmuz 🔊 ဇူလိုင်
🔊 Ağustos 🔊 ဩဂုတ်
ah to ba
🔊 Eylül 🔊 စက်တင်ဘာ
sé tem ba
🔊 Ekim 🔊 အောက်တိုဘာ
🔊 Kasım 🔊 နိုဝင်ဘာ
no bem ba
🔊 Aralık 🔊 ဒီဇင်ဘာ
di cem ba
🔊 Bugün saat kaçta gidiyorsun? 🔊 ဘယ်နှစ်နာရီပြန်မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
🔊 Sabah, saat sekizde 🔊 မနက်ရှစ်နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
🔊 Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe 🔊 မနက်ရှစ်နာရီ ဆယ့်ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
🔊 Sabah, saat sekiz buçukta 🔊 မနက်ရှစ်နာရီ ခွဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
🔊 Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala 🔊 မနက်ကိုးနာရီထိုးဘို့ဆယ့်ငါးမိနစ်
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
🔊 Akşam saat altıda 🔊 ညနေခြောက်နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
🔊 Geç kaldım 🔊 ကျနော် နောက်ကျနေပြီ
kya nau naukʔ kya nei pi
🔊 Taksi! 🔊 တက်(က) စီ
🔊 Nereye gitmek istersiniz? 🔊 ဘယ်ကိုသွားချင်လဲ
bai ko thou chin lé
🔊 Gara gidiyorum 🔊 ဘူတာရုံ ကိုသွားမယ်
bū ta youN ko thou mei
🔊 Gece ve Gündüz oteline gidiyorum 🔊 ဟိုတယ် မှာနေ့ရောညပါ နေမယ်
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
🔊 Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen? 🔊 လေဆိပ်ကိုပို့ပေးနိုင်မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
🔊 Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen? 🔊 အထုပ်တွေယူပေးနိုင်မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
🔊 Buraya uzak mı? 🔊 ဒီကနေတော်တော်ဝေးသလား
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
🔊 Hayır yakın 🔊 နီးနီးလေးပါ
nī nī lai pa
🔊 Evet biraz daha uzakta 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ နဲနဲဝေးတယ်
hoʔ kei, nei nei wai tai
🔊 Ne kadar tutar? 🔊 ဘယ်လောက်ကျ မလဲ
bai laukʔ kya me lé
🔊 Lütfen beni buraya götürün 🔊 ဒီကိုပို့ပေးပါ
di ko pot pé pa
🔊 Sağa gideceksiniz 🔊 ညာဘက်
🔊 Sola gideceksiniz 🔊 ဘယ်ဘက်
🔊 Dümdüz gidin 🔊 တည့်တည့်
🔊 Burası 🔊 ဒီမှာ
🔊 Şu taraftan 🔊 ဟိုမှာ
🔊 Dur! 🔊 ရပ် !
🔊 Acele etmeyin 🔊 ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ
pyé pyé lautʔ pa
🔊 Makbuz alabilir miyim lütfen? 🔊 ကားခဖြတ်ပိုင်းလေးရေးပေးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa
🔊 Burada ailen var mı ? 🔊 ဒီမှာမိသားစုရှိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
🔊 Babam 🔊 အဖေ
🔊 Annem 🔊 အမေ
🔊 Oğlum 🔊 သား
🔊 Kızım 🔊 သမီး
🔊 Erkek kardeş 🔊 အစ်ကို
🔊 Kız kardeş 🔊 အစ်မ
🔊 Erkek arkadaş 🔊 သူငယ်ချင်း
thu ŋei chiN
🔊 Kız arkadaş 🔊 သူငယ်ချင်း
🔊 Erkek arkadaşım 🔊 ကျမသူငယ်ချင်း
kya ma thu ŋei chiN
🔊 Erkek arkadaşım 🔊 ကျနော့်သူငယ်ချင်း
kya nau thu ŋei chiN
🔊 Kız arkadaşım 🔊 ကျနော့်သူငယ်ချင်း
🔊 Kocam 🔊 ကျမခင်ပွန်း
kya ma kiN puN
🔊 Kocam 🔊 ကျမယောက်ျား
kya ma yaukʔ kya
🔊 Karım 🔊 ကျနော့် မိန်းမ
kya nau maiN ma
🔊 Karım 🔊 ကျနော့် ဇနီး
kya nau za nī
🔊 Ülkenizi çok seviyorum 🔊 ကျနော် ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
🔊 Seni seviyorum 🔊 ချစ်တယ်
🔊 Mutluyum 🔊 ပျော်တယ်
🔊 Üzgünüm 🔊 စိတ်ညစ်တယ်/ဝမ်းနည်းတယ်
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
🔊 Burada rahatım 🔊 ဒီမှာပျော်တယ်
di mha pyau tai
🔊 Üşüyorum 🔊 ချမ်းတယ်
🔊 Terliyorum 🔊 အိုက်တယ်
🔊 Çok büyük 🔊 ကြီးတယ်
🔊 Çok küçük 🔊 သေးတယ်
🔊 Mükemmel 🔊 အတော်ပဲ
ah tau pai
🔊 Bu akşam çıkmak ister misin? 🔊 ဒီညနေအပြင်ထွက်ချင်လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
🔊 Bu akşam çıkmak isterim 🔊 ဒီညနေအပြင်ထွက်ချင်ပါတယ်
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
🔊 Iyi fikir 🔊 ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ်
di ah si ah sin kaung tai
🔊 Eğlenmek istiyorum 🔊 ပျော် ချင် လို့ ပါ
pyau chiN loɁ pa
🔊 Iyi fikir değil 🔊 ဒီအကြံမကောင်းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
🔊 Bu akşam çıkmak istemiyorum 🔊 ဒီညနေအပြင်မထွက်ချင်ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
🔊 Dinlenmek istiyorum 🔊 ကျနော် အနားယူချင်တယ်
kya nau ah nā yu chiN the lā
🔊 Spor yapmak ister misin? 🔊 အားကစား သွားလုပ်ချင်သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
🔊 Evet, rahatlamak istiyorum 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်မှဖြစ်မယ်
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
🔊 Tenis oynarım 🔊 ကျနော် တင်းနစ်(စ)ကစားတယ်
kya nau tin nitɁ ka sā tai
🔊 Yok teşekkürler, oldukça yorgunum 🔊 မကစားချင်ပါဘူး မောနေလို့
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ
🔊 Bar 🔊 ဘား/အရကျဆိုငျ/ဘီယာဆိုငျ
ba/ ah yet ? SaiN
🔊 Bir şey içermisin ? 🔊 ဘာသောက်ချင်သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
🔊 Içmek 🔊 သောက်
🔊 Bardak 🔊 ဖန်ခွက်
🔊 Tabii ki 🔊 ကောင်းပါတယ်
kaung pba tei
🔊 Ne alırsın ? 🔊 ဘာသောက်ချင်သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
🔊 Içecek ne var ? 🔊 ဘာသောက်စရာရှိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
🔊 Su ya da meyve suları var 🔊 ရေနဲ့အသီးဖျော်ရည်
yei nei ah thi pyau yei
🔊 Su 🔊 ရေ/သောက်ရေသန့်
yei/ thaukʔ yei than'
🔊 Buz var mı lütfen ? 🔊 ရေခဲထည့်ပေးပါ
yei khé téi pé ba
🔊 Buz 🔊 ရေခဲ
🔊 Çikolata 🔊 ချောကလက်ဖျော်ရည်
shau ka letʔ pyau yei
🔊 Süt 🔊 နွားနို့
🔊 Çay 🔊 လဘက်ရည်
la péʔ yei
🔊 Çay 🔊 ရေနွေးကြမ်း
yei nway 'kyaN
🔊 Kahve 🔊 ကော်ဖီ
🔊 Şekerli 🔊 သကြားနဲ့
the kyɑ̄ nei'
🔊 Kremalı 🔊 နို့နဲ့
🔊 Şarap 🔊 ဝိုင်
🔊 Bira 🔊 ဘီယာ
🔊 Bir çay lütfen 🔊 လဘက်ရည်တစ်ခွက်ပေးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
🔊 Bir bira lütfen 🔊 ဘီယာတစ်ခွက်ပေးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
🔊 Ne içersiniz ? 🔊 ဘာသောက်ချင်ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
🔊 Iki çay lütfen! 🔊 လဘက်ရည်နှစ်ခွက်ပေးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
🔊 Iki bira lütfen! 🔊 ဘီယာနှစ်လုံးပေးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
🔊 Hiç bir şey, teşekkürler 🔊 ရပါတယ်၊
ya pa tai
🔊 Hiç bir şey, teşekkürler 🔊 ကိစ္စမရှိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
🔊 Sağlığına! 🔊 သင့်အတွက်
thin ah toué
🔊 Sağlığına! 🔊 ချီယားစ်
🔊 Hesap lütfen! 🔊 ဘီ(လ) ရှင်းမယ်
bill shiN mei
🔊 Hesap lütfen! 🔊 ဘယ်လောက်ကျသလဲ
bei laukʔ kya the lei
🔊 Borcum ne kadar lütfen? 🔊 ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
🔊 Yirmi öro 🔊 ယူရို နှစ်ဆယ်
euro hnit sai
🔊 Seni davet ediyorum 🔊 ကျမပေးပါရစေ
kya ma pei pa ya sai
🔊 Restoran 🔊 စားသောက်ဆိုင်
sɑ̄ thauʔ saiN
🔊 Yemek yer misin ? 🔊 စားချင်ပြီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
🔊 Evet, memnuniyetle 🔊 ဟုတ်ကဲ့ စားချင်ပါတယ်။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
🔊 Yemek yemek 🔊 စားမယ်။
🔊 Nerede yemek yiyebiliriz? 🔊 ဘယ်ဆိုင်မှာစားလို့ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 Öğle yemeği nerede yiyebiliriz? 🔊 နေ့လည်စာ ဘယ်မှာစားလို့ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 Akşam yemeği 🔊 ညစာ
🔊 Kahvaltı 🔊 နံနက်စာ
naN neiʔ sa
🔊 Bakar mısınız ? 🔊 ခွင့်ပြုပါရှင်
kwoiN pyu pa shiN
🔊 Mönüyü alabilirmiyim lütfen! 🔊 မီနျူးလေးရနိုင်မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
🔊 Işte mönü! 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
🔊 Ne yersin ? Et mi? balık mı? 🔊 ဘာစားချင်လဲ၊ ငါးဟင်းလား၊ အသားဟင်းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
🔊 Pilavlı olsun 🔊 ထမင်းလည်းစားမယ်။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
🔊 Makarnalı olsun 🔊 ခေါက်ဆွဲ လည်းစားမယ်။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
🔊 Patates 🔊 အာလူး။
🔊 Sebzeler 🔊 ဟင်းသီး ဟင်းရွက်။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
🔊 Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta 🔊 ကြက်ဥမွှေကြော်၊ ကြက်ဥအလုံးကြော်၊ ကြက်ဥ မကျက်တကျက်ပြုတ်။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
🔊 Ekmek 🔊 ပေါင်မုန့်
🔊 Tereyağ 🔊 ထောပတ်
🔊 Salata 🔊 ဆလပ်ရွက်
sa laʔ yoweʔ
🔊 Tatlı 🔊 အချိုပွဲ
ah cho pywei
🔊 Meyve 🔊 အသီးအနှံ
ah thī ah nhaN
🔊 Bir bıçak alabilirmiyim lütfen? 🔊 ဓားရှိသလား။
dā shi' the lā
🔊 Evet hemen getiriyorum 🔊 အခုယူလာပေးပါမယ်။
ah ku yu la ' pei pa mei
🔊 Bıçak 🔊 ဓား
🔊 Çatal 🔊 ခက်ရင်း
🔊 Kaşık 🔊 ဇွန်းတစ်ချောင်း
'zouN thit chaung
🔊 Sıcak yemek mi bu ? 🔊 ဒီဟင်းကပူပူနွေးနွေးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
🔊 Evet, üstelik çok baharatlı! 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ စပ်လည်းစပ်တယ်။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
🔊 Sıcak 🔊 ပူတယ်။
🔊 Soğuk 🔊 အေးတယ်။
🔊 Baharatlı 🔊 စပ်တယ်။
🔊 Ben balık alacağım 🔊 ငါးမှာမယ်။
'ŋa mha mei
🔊 Ben de 🔊 ကျမလည်းအတူတူဘဲ။
kya ma 'lei ah tu tu bei
🔊 Ben de 🔊 ကျနော်လည်းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu bei
🔊 Geç oldu, gitmem gerek! 🔊 နောက်ကျနေပြီ၊
naukʔ kya nay pi
🔊 Geç oldu, gitmem gerek! 🔊 သွားတော့မယ်
'thou dau' mei
🔊 Tekrar görüşebilir miyiz? 🔊 နောက်ပြန်တွေ့လို့ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
🔊 Tabii, memnuniyetle 🔊 တွေ့ကြတာပေါ့
twei' kya ta pauʔ
🔊 Bu adreste oturuyorum 🔊 ဒါ ကျမလိပ်စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
🔊 Telefon numaran var mı? 🔊 ဖုန်းနံပါတ် ပေးပါလား
phone number pei pa lā
🔊 Evet, işte 🔊 ရော့၊ ဒီမှာ
yaūʔdmha
🔊 Seninle güzel vakit geçirdim 🔊 အခုလိုတွေ့ရတာ ပျော်ပါတယ်
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
🔊 Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum. 🔊 ကျမလည်း ရှင်နဲ့ တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
🔊 Yakında görüşürüz 🔊 ပြန်ဆုံကြရအောင်နော်
pyaN souN ya aung nau
🔊 Inşallah 🔊 ပြန်ဆုံမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
🔊 Hoşça kal! 🔊 သွားတော့မယ်
🔊 Yarın görüşürüz 🔊 မနက်ဖြန် တွေ့မယ်
me nei pyaN twei' mei
🔊 Hoşça kal! 🔊 တာ့တာ
🔊 Otobüs durağı nerede lütfen? 🔊 ဘတ်(စ)ကား မှတ်တိုင် လေးတစ်ဆိတ်လောက်
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
🔊 Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ? 🔊 ရနျကုနျအတှကျလတျမှတျဘိုးဘယျလောကျကလြဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
🔊 Bu tren nereye gider lütfen ? 🔊 ဒီရထားကဘယ်ကိုသွားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
🔊 Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu? 🔊 ဒီရထားက ရန်ကုန် မှာရပ်လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
🔊 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor? 🔊 ရန်ကုန် ကိုသွားတဲ့ရထား ဘယ်အချိန်ထွက်မှာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
🔊 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor? 🔊 ရန်ကုန် ကိုသွားတဲ့ရထား ဘယ်အချိန်ဆိုက်မှာလဲ
🔊 Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen 🔊 ရန်ကုန် မြို့ အတွက် လက်မှတ် တစ်စောင်ပေးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
🔊 Tren saatleri var mı? 🔊 ရထား အချိန်ဇယားရှိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
🔊 Otobüs saatleri? 🔊 ဘတ်(စ) ကား အချိန်ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
🔊 Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen? 🔊 ရန်ကုန် မြို့သွားတဲ့ရထားက ဘယ်မှာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
🔊 Bu 🔊 ဒီရထား
di yet tɑ̄
🔊 Bir şey değil, iyi yolculuklar! 🔊 ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ခရီးချောမွေ့ပါစေ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
🔊 Araba tamirhanesi 🔊 ကားဝပ်ရှော့
kā woʔ yau
🔊 Benzin istasyonu 🔊 ဓါတ်ဆီဆိုင်
datʔ si saiN
🔊 Depoyu doldurun lütfen 🔊 ဓါတ်ဆီ အပြည့် ဖြည့်ပေးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
🔊 Bisiklet 🔊 စက်ဘိန်း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
🔊 Şehir merkezi 🔊 မြို့လယ်ခေါင်/ မြို့ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
🔊 Banliyö 🔊 ဆင်ခြေဖုံး/မြို့ပြင်
shin ché phoN / myo pyiN
🔊 Burası büyük bir şehir 🔊 မြို့ကြီး
🔊 Burası bir köy 🔊 ရွာ
🔊 Dağ 🔊 တောင်
🔊 Göl 🔊 ရေကန်
🔊 Kırsal alan 🔊 မြို့ပြင်
🔊 Otel 🔊 ဟိုတယ်
🔊 Daire 🔊 တိုက်ခန်း
🔊 Hoş geldiniz! 🔊 ကြိုဆိုပါတယ်
kyo sho pa tai
🔊 Boş odanız var mı? 🔊 အခန်းလွတ်ရှိပါသလား ခင်ဗျာ / ရှင်
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
🔊 Odada banyo var mı? 🔊 ရေချိုးခန်းပါလား
yé chō kaN pa lā
🔊 Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz? 🔊 တစ်ယောက်အိပ်ကုတင် နှစ်လုံး လိုချင်ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
🔊 Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz? 🔊 နှစ်ယောက်အိပ် အခန်းယူချင်ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
🔊 Banyolu-balkonlu-duşlu oda 🔊 ရေချိုးကန်ပါတဲ့အခန်း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန်း/ ရေချိုးခန်းပါတဲ့အခန်း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
🔊 Yatak kahvaltı 🔊 မနက်စာပါတဲ့အခန်း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
🔊 Bir geceliği ne kadar? 🔊 တစ်ညဘယ်လောက်ကျလဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
🔊 Önce odayı göreyim lütfen 🔊 အခန်းကိုအရင်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
🔊 Evet, tabii ki 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါတယ်
hokʔ ké' , ya pa tai
🔊 Teşekkürler, oda çok güzel 🔊 အခန်းကတော်တော်ကောင်းပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
🔊 Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim? 🔊 ကောင်းပါပြီ၊ ဒီနေ့ညအတွက် အခန်းယူလို့ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
🔊 Benim için biraz pahalı, teşekkürler 🔊 နေပါစေတော့၊ ကျနော့် အတွက်တော့ဈေးနည်းနည်းကြီးနေတယ်။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
🔊 Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen? 🔊 ကျနော့် ပစ္စည်းတွေသယ်လာပေးနိုင်မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
🔊 Odam ne tarafta lütfen? 🔊 ကျနော့် အခန်းဘယ်မှာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
🔊 Birinci katta 🔊 နှစ်လွှာမှာပါ
hnit lewo mha pa
🔊 Asansör var mı? 🔊 ဓါတ်လှေခါး ရှိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
🔊 Asansör sol tarafınızda 🔊 ဓါတ်လှေခါး ဘယ်ဖက်မှာရှိပါတယ်
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
🔊 Asansör sağ tarafınızda 🔊 ဓါတ်လှေခါး ညာဖက်မှာရှိပါတယ်
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
🔊 Giysi temizleme yeri nerede? 🔊 ပင်းမင်းခန်းဘယ်မှာရှိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
🔊 Giriş katında 🔊 မြေညီထပ် မှာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
🔊 Giriş katı 🔊 မြေညီထပ်
myé nyi tatɁ
🔊 Yatak odası 🔊 အခန်း
🔊 Kuru temizleme 🔊 ပင်းမင်းဆိုင်
piN miN saiN
🔊 Kuaför 🔊 ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်။
saN piN nyut saiN
🔊 Araba park yeri 🔊 ကားပါကင်။
kā pa kiN
🔊 Toplantı odasında buluşalım mı? 🔊 အစည်းအဝေးခန်းဘယ်မှာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
🔊 Toplantı odası 🔊 အစည်းအဝေးခန်း
ah sī ah wai kaN
🔊 Havuz ısıtmalıdır 🔊 ရေနွေးတဲ့ ရေကူးကန်
yé nawai téi yé kū kaN
🔊 Yüzme havuzu 🔊 ရေကူးကန်
yé kū kaN
🔊 Beni saat yedi'de uyandırın lütfen 🔊 မနက် ခုနှစ်နာရီမှာ နှိုးပေးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
🔊 Anahtar lütfen 🔊 ကျေးဇူးပြုပီး သော့ပေးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
🔊 Pass lutfen 🔊 ကျေးဇူးပြုပီး ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ပေးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
🔊 Bana mesaj var mı? 🔊 ကျနော့် အတွက် ဘာသတင်းပေးထားတာရှိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
🔊 Evet, buyrun 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
🔊 Hayır, sizin için bir şey yok 🔊 ရှင့်အတွက် ဘာမှမရှိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
🔊 Nerede para bozdurabilirim? 🔊 အကြွေဘယ်မှာလဲလို့ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
🔊 Bana para bozar mısınız lütfen ? 🔊 ပိုက်ဆံ အကြွေလဲပေးပါ ခင်ဗျာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
🔊 Evet bozarız, ne kadar istersiniz? 🔊 ရပါတယ်၊ ဘယ်လောက်လဲချင်ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé
🔊 Afedersiniz, Sarah burada mı ? 🔊 ဆာရာ (Sarah) ရှိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
🔊 Evet burada 🔊 ရှိပါတယ်
🔊 Dışarı çıktı 🔊 အပြင်သွားပါတယ်
ah pyiN thou pa tai
🔊 Cep telefonundan arayabilirsiniz 🔊 သူ့ဖုန်းကိုဆက်ကြည့်ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
🔊 Onu nerede bulabilirim? 🔊 သူ့ကို ဘယ်မှာသွားရှာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
🔊 Işe gitti 🔊 သူအလုပ်သွားတယ်
thu ah lautɁ thuwa tai
🔊 O evde 🔊 သူအိမ်မှာရှိတယ်
thu aiN mha chiɁ tai
🔊 Afedersiniz, Julien burada mı ? 🔊 ဂျူလီယံ (Julien) ရှိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
chitɁ pa tai
🔊 Dışarı ?ıktı 🔊 အပြင်သွားပါတယ်
🔊 Plaj 🔊 ပင်လယ်ကမ်းခြေ / ဘိ (ချ)
piN lai kaN kyé / bi (che)
🔊 Nereden top satın alabilirim? 🔊 ဘောလုံးဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
🔊 Şu tarafta dükkan var 🔊 ဒီတည့်တည့်သွားရင် ဆိုင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
🔊 Top 🔊 ဘောလုံး
🔊 Dürbün 🔊 မှန်ပြောင်း
🔊 Kasket 🔊 ကက်ဦးထုပ် တစ်လုံး
ket au thaukʔ tit loN
🔊 Havlu 🔊 မျက်နှာသုတ်ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
🔊 Ayağa giyilen sandal 🔊 ညှပ်ဖိနပ်
nyatʔ phi nat
🔊 Kova 🔊 ရေပုံး
🔊 Güneş kremi 🔊 နေရောင်ကာ ခရင်(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
🔊 Mayo 🔊 ရေကူးဘောင်းဘီ
yé kū baung bi
🔊 Güneş gözlüğü 🔊 နေကာမျက်မှန်
nai ka myet myamaN
🔊 Kabuklu deniz ürünleri 🔊 ပင်လယ်စာ
piN lai sa
🔊 Güneşlenmek 🔊 နေစာလှုံ
nai sa loN
🔊 Güneşli 🔊 နေသာတယ်
nai tha tai
🔊 Gün batımı 🔊 နေဝင်ချိန်
nai wiN chain
🔊 Güneş şemsiyesi 🔊 နေကာထီး
nai ka tī
🔊 Güneş 🔊 နေ
🔊 Güneş çarpması 🔊 နေသာချိန်
nai tha chain
🔊 Buarada yüzmek tehlikeli mi? 🔊 ဒီမှာရေကူးရင် အန္တရယ် ရှိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
🔊 Hayır, tehlikeli değil 🔊 အန္တရယ်မရှိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
🔊 Evet, burada yüzmek tehlikeli 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာရေကူးလို့မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
🔊 Yüzmek 🔊 ရေကူးတယ်
yé kū tai
🔊 Yüzme 🔊 ရေကူး
🔊 Dalga 🔊 လှိုင်း
🔊 Deniz 🔊 ပင်လယ်
🔊 Kumul 🔊 သဲသာင်ကုန်း
thé thaung kouN
🔊 Kum 🔊 သဲ
🔊 Yarın hava nasıl olacak? 🔊 မနက်ဖြန်အတွက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် ဘယ်လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
🔊 Hava değişecek 🔊 ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲရှိတယ်
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
🔊 Yağmur yağacak 🔊 မိုးရွာလိမ့်မယ်
mō yawa laint mai
🔊 Güneşli olacak 🔊 နေသာလိမ့်မယ်
nai tha laint mai
🔊 Çok rüzgarlı olacak 🔊 လေတိုက်လိမ့်မယ်
lai taikɁ laint mai
🔊 Mayo 🔊 ရေကူးဝတ်စုံ
yé kū wut sauN
🔊 Gölge 🔊 အရိပ်
🔊 Bana yardım edebilirmisiniz lütfen? 🔊 ကျနော့် ကိုကူညီပါ
kya nau ko ku nyi pa
🔊 Bana yardım edebilirmisiniz lütfen? 🔊 ကျမကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
🔊 Kayboldum 🔊 ကျမမျက်စေ့လည်နေပြီ
kya ma myetʔ si lei nei pyi
🔊 Kayboldum 🔊 ကျမလမ်းပျောက်နေပြီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
🔊 Ne istersiniz? 🔊 ဘာအကူအညီပေးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
🔊 Ne oldu? 🔊 ဘာဖြစ်လဲ
ba pyitʔ lei
🔊 Nerede tercüman bulabilirim? 🔊 စကားပြန် ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
🔊 En yakın eczane nerede? 🔊 ဆေးဆိုင် အနီးဆုံးဘယ်မှာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
🔊 Lütfen bir doktor çağırın? 🔊 ဆရာဝန်ခေါ်ပေးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
🔊 Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda? 🔊 ဘာဆေးသောက်နေလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
🔊 Hastane 🔊 ဆေးရုံ
🔊 Ezcane 🔊 ဆေးဆိုင်
🔊 Doktor 🔊 ဆရာဝန်
sa ya ouN
🔊 Sağlık merkezi 🔊 ဆေးခန်း
🔊 Kimlik kağıtlarımı kaybettim 🔊 ကျ နော့်စာရွက်စာတန်း တွေပျောက်သွားလို့
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
🔊 Kağıtlarımı çaldılar 🔊 ကျ နော့်စာရွက်စာတန်း တွေအခိုးခံရလို့
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
🔊 Kayıp eşyalar bürosu 🔊 ပျောက်ဆုံးပစ္စည်း များရှာဖွေရန်နေရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
🔊 Ilk yardım merkezi 🔊 အရေးပေါ်ဌာန
ah yei pau tha na
🔊 Acil çıkış kapısı 🔊 အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်
ah yei pau thwetʔ pauʔ
🔊 Polis 🔊 ရဲ
🔊 Kimlik kağıtlarım 🔊 စာရွက်စာတန်း
🔊 Para 🔊 ပိုက်ဆံ
🔊 Pasaport 🔊 နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
🔊 Pasaport 🔊 ပတ်(စ)ပို့
🔊 Bagaj 🔊 သေတ္တာ
🔊 Bagaj 🔊 ခရီးဆောင်အိတ်
kha yī saung aitʔ
🔊 Yok teşekkürler 🔊 ရပါတယ်၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
🔊 Beni rahat bırakın! 🔊 မနှောက်ယှက်ပါနဲ့
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
🔊 Gidin! 🔊 သွား
Mp3 ve pdf'leri indirin > Birmanca